Klopp oo farriin adag u diray shaqsiyaadka ku fikiraya in Liverpool ay guuldarro ku dhammaysan doono xilli ciyaareedkan – Gool FM
(England) 06 Maajo 2019. Macalinka reer Germany iyo kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa fariin adag u diray shaqsiyaadka ku fikiraya in Reds ay ku guuldareysan doonto ku guuleysiga tartamada Premier League iyo Champions League xilli ciyaareedkan.
Jürgen Klopp ayaa u sheegay wargeyska “Sport” ee dalka Spain:
“Shaqsiyaad badan ee taageera kooxo kale, way ku farxi doonaan hadii aan ku guuldareysano ku guuleysiga koobab, laakiin kooxaha oo dhan marka laga reebo Manchester City, wali way naga dambeeyaan”.
“Marka ugu horeysay ee aan imid kooxda Liverpool, waxaan ogaaday in kooxdaan ay muhiim tahy inay sameyso wax ka fiican kooxaha kale, isla markaana ay qabato shaqo adag, sidaasi darteed waan sameyn doonaa sida ugu adag, sababtoo ah nasiib xili kasta nalama jiro”.
“Waan ogahay sida aan u gaari laheyn bar-tilmaameedyadeena, balse laba kooxood iyo ciyaartoyda ku sugan ayaa diyaar u ah inay ku guuleystaan ​​horyaalka”.
“Kahor inta uusan bilaaban xili ciyaareedka, waxaad dooneysaa inaad ku guuleysato horyaalka, balse maalinta aad ogaato inaadan sidaas sameyn karin, waxaad dareemeysaa niyadjab”.
“Anaga ahaan ujeedkeena ugu weyn ayaa ah inaan guuleysano kulamada ugu badan inta suurtogal ah, ciyaartoyda waxay qabteen shaqo ka badan inta aan ka codsanay”.
“Kuma fikirayo dhacdo xun kulanka Talaadada, ugu horeyn aan la ciyaarno Barcelona, ​​waan ognahay inuu noqon doono kulan adag, laakiin guusha ayaa adkaan doonta”.